Fanasana tongotra sy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo amin’ny fomba hafa ary tantaran’i Joba an-tsehatra – FJKM Ambavahadimitafo Fanasana tongotra sy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo amin’ny fomba hafa ary tantaran’i Joba an-tsehatra |
Fanasana tongotra sy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo amin’ny fomba hafa ary tantaran’i Joba an-tsehatra
Amin’ny Alahady 05 Avril 2009 dia Alahadin’ny Sampan-drofia izay fidiran’ny fiangonana kristiana rehetra amin’ny fiombonana fahoriana amin’i Jesoa Kristy.
Amin’io alahady 05 avril 2009 io, eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo, dia hisy tantara an-tsehatra, tantaran’i Joba izay karakarain’ny Vaomiera Aim-panahy. Kanefa mihavaka manontolo io fotoana alahady maraina io satria tsy ho mpijery fotsiny akory na mpanatrika ireo kristiana ho avy eo fa tena hiaina manontolo an’izany fotoana izany hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany.
Toy izao ny ho fizotry ny fotoam-pivavahana maraina :
Fanasana tongotra (amin’ny 07H30) :
Ny fanasana tongotra dia fampianarana napetraky ny Tompo tamin’ny mpianany.
Ho an’izay manao ny fanasana tongotra dia endriky ny fanetre-tena lalina tokony hanànan’izay rehetra manara-dia ny Tompo izany
Ho an’izay sasàna tongotra kosa dia endriky ny fanekena ho diovin’i Jesoa Kristy amin’ny loto sy ny fahotana ary ny pentipentina ao amin’ny fiainam-panahin’ny mpino.
Endriky ny fifankatiavana tonga lafatra ny fanasana tongotra ka anekena ho mpanompon’ny namana.
Amin’ny 09 ora maraina no fanombohana ny fanompoam-pivavahana amin’ny alàlan’ny hira fiderana sy ny vavaka, ary tohizana avy hatrany amin’ny rakitra sy ny filazàna ny raharaham-piangonana. Rehefa vita izany dia mitohy amin’ny tantara an-tsehatra izay mikasika an’i Joba ampilaharina amin’ny fahorian’ny Tompo.
Fanasan’ny Tompo :
Mandritra ny tantara an-tsehatra mihitsy no hanatanterahana ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Amin’izany dia Kapôka iray lehibe no hiombonana handraisana ny divay ary mofo iray lehibe ihany koa no hiombonana hifampizarana.
Hafatra sy fandaminana :
– Entanina isika izay hanatrika ny fanasana tongotra mba hanao kiraro mora esorina sy ampidirina mba ahafahana mampizotra amin’ny tokony ho izy izany fotoana izany
– Entanina koa isika izay vonona handray ny Fanasan’ny Tompo mba hanasa tsara ny tànana alohan’ny hidirana ato am-piangonana satria handalo amin’ny tànan’ny tsirairay avy ny mofo izay hohanin’ny olona aty aoriana. Toy izany koa ny kôpy izay tokony hofafàna tsara amin’ny lamba efa voaomana satria iny no handraisan’ny aty aoriana ny ran’i Kristy.
Mamangy antsika amin’ny fomba maro samihafa Andriamanitra ka te hanome fiadanam-po ho an’ny tsirairay.
Enga anie io fotoana io mba handraisanao izany fiadanam-po izany tokoa , indrindra fa ny fanatrehanao ny fotoana izay karakarain’ny Vaomieran’ny Aim-panahy amin’ny alahady 05 Avril 2009 io manomboka amin’ny 7ora sy sasany maraina.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amen.